Yasekwa ngonyaka ka-2000, Shandong QianBaidu Machinery Technology Co., Ltd. yinkampani iqela elaziwa-kakuhle kwiPhondo Shandong, ikakhulu inxaxheba kwimveliso kunye R & D ka milenge inqaba enkulu kunye naphakathi, izityalo eziphathekayo ukuxubana, milenge zokwakha udonga lwangaphandle , bekwilift zokwakha kunye kwizikhundla zemveliso soda uthuthu. Iminyaka yophuhliso, inkokeli kushishino.
Ukususela ekusekweni kwe nkampani ngokusebenzisa ulawulo olungqongqo kunye nefilosofi zoshishino nesebenzayo, kushishino iseke ukuthembeka ephakamileyo. Ngoku Le nkampani iye iSebe ukusebenza, iSebe of Technology, iSebe izinto, iSebe Lezomthetho, i-Ofisi yoMphathiswa wezeMali, iSebe yofakelo, isebe yesondlo.
Products ikakhulu kumazwe angaphandle ukuya eYurophu eUnited States, mpuma Asia, South Korea, Japan kunye namanye amazwe, inkampani yomelelani nincedwa ngamandla zobugcisa, ukhuseleko emsebenzini kuqala-class, abathengi basekhaya angaphandle ngokufanayo.
Ngomoya lwamashishini we "tye, ukuthobeka, ezintsha kunye nokugqwesa" njengoko amaxabiso engundoqo yabantu, inkampani ibambelela bulumko kwimarike "umgangatho namhlanje imarike ngomso, ukuthembakala kwishishini imakethi engaphathekiyo , kwaye ulwaneliseko lwabasebenzisi imakethi obungunaphakade ", Ukulandelwa" ukholo okulungileyo inkonzo egqibeleleyo, ulwaneliseko nekhulu ekhulwini umthengi. " Ngokusebenzisa ulawulo lwezenzululwazi, ulawulo olululo, inkonzo esemgangathweni kunye nesimbo ngokungqongqo of contract kwaye uthembekile iphumelele uninzi abasebenzisi indumiso nendumiso.